Fitondrana tapaka… | NewsMada
Efa tsy vato mafana intsony no raisin’ny mpitohy aina, amin’izao raharaham-pirenena izao, fa tena vato mahamay. « Tapaka » no iantsoana ny mpitohy aina na sokajiana ireo mpiray aina amin’ny tena tany an-tendrony. “Tapaka sy namana”, hoy isika rehefa mampiasa io teny io. Raha dinihina ny ataon’ny fitondram-panjakana ny fahorian’ireo mpitohy aina, karazany trano bongo ivelan’ny tanàna sy mananasy ivelan’ny saha satria tsy mbola laharam-pahamehan’izy ireo aloha. Raha hita fa tena hanapaka ny fidiram-bolam-bahoaka ny fiakaran’ny saran-dalan’ny taksibe, may volon-tratra ny mpitondra nanao filankevitry ny governemanta manokana, nanapahana ny tokony hatao, sao ho tapaka eo ny tongo-tseza ka hiongana tsy misy mpanongana…
Very fanahy mbola velona ny valalabemandry satria efa telo taona mahery izao ny fanamby nataon’ny filoham-pirenena amin’ny hanafoanana ity jiro tapatapaka ity na ny delestazy. Tsy vitan’ny kabary mihevotrevotra sy mitsambikimbiki-mikimpy ny raharaha. Tsy hita ny tena vahaolana raikitra sy lavitra ezaka fa vitan’ny kitsapatsapa sy manolo mpitantana isak’izay mahatsiaro tsotra izao. Sokina am-bodivoaroy, ny vahaolan’ny jiro tapaka ity, hitan’ny maso fa sarotra alaina. Ny marina kokoa, iniana tapahina tsotra izao ny vahaolana, toy ny soso-kevitra nomen’ny orinasa mpitrandraka any Tsimiroro. Sao ho tapaka tombontsoa?
Mihamitontogana hatrany ny fiainam-bahoaka. Efa tsy mahavidy menaka iray litatra intsony ny ankamaroany Malagasy, zara raha mahavidy tapany. Marobe ireo tokantrano zara raha mahandro vary tapa-kapoaka atao sosoa hiatrehana ny alina… Mihamafy ny fiainana, mampiakatra ny saran-dalana ny taksibe, ho tapa-tenda ny kely vola satria nofoanana ny tapa-dalana. Hanenjana mafy koa ireo mpitandro filaminana sasany, amin’ny fanapahana ireo fiara mpitatitra tsy manara-dalàna. Mifanindran-dalana amin’izany rehetra izany, tsy mba tapaka mihitsy ny vola miditra amin’ireo tsimatimanota, ry mpanao kolikoly avo lenta na fomba farany izay mirefarefa sy mamohehatra aza. Toa tsy ho tapa-kevitra ny tena hampihatra ny tany tan-dalàna mihitsy ny fitondram-panjakana.
Raha mitohy izao fitondrana tapatapaka izao, hitondra tapany lava tahaka ny kibon’omby ririnina eto isika mianakavy. Tsy very eny an-tapa-dalana mihitsy ireo lehibe tsy andrian-keloka fa mahay miporitsaka etsy, mahay miporitsaka eroa. Milaza ho mikatsaka ny tombontsoam-bahoaka amin’ny vahaolana petatoko sy vonjitavanandro. Koa asakasak’isika vahoaka, mitaintain-dava amin’ny tsy fandriampahalemana mila hanapaka lalandra ity. Vono olona etsy, fanafihana mitam-bady eroa, dahalo aman-jatony miakatra an-tanàna, ny fitsaram-bahoaka tsy mety tapaka fa mitohy hatrany hatrany. Raha mitohy izao, ho tapaka izay tsy ho tapaka. Koa alao hery ry vahoaka, fa toko tapaka vilany mitongilana ity, ka izay tsy mety ve tsy hoesorina e!